ह्विप अप | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कटेज पनीर कस्तो उपयोगी छ?
कुटीर चीज कसरी उपयोगी छ? दाँतलाई सुदृढ बनाउदै कुटीर पनीरको लाभकारी गुणहरू यसको उपचार संरचनाको कारण हो। कुटीर पनीरमा निहित दूध प्रोटीन केसिनको उच्च पोषण मूल्य हुन्छ र पशु प्रोटीनहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ, कुटीर चीजको g०० ग्राम ...
लंचको लागि जुक्नी र बैगुनबाट पकाउने?
खाजाको लागि चिचनी र बैंगनबाट के पकाउने? स्ट्यू, मासु, प्याज र सबै तरकारीहरू फ्राई गर्नुहोस् जुन तपाईं फ्रिजमा पाउन सक्नुहुन्छ, कभर र निविदासम्म उमालेर। राम्रो पुरानो रेसिपीहरू ...
तिनीहरू भन्छन् कि तपाईं रात को लागि एक समान बटुआमा बर्थवाट डाल्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंसँग बिहानको पुष्प हुनेछ। यो कसले गरे? कुन पानी खानुपर्छ?
तिनीहरू भन्छन् कि उही बकवाइट ग्रोटहरू रातभर पानीले खन्याउन सकिन्छ, र बिहान त्यहाँ दलिया हुनेछ। कसले गरे के पानी भर्ने? You यदि तपाईंलाई आफ्नो भाँडामा पानीको स्वाद मनपर्दछ भने, तब ...
Funchoza र उनको ड्रेसिङ .. एक नुस्खाको सिफारिस गर्नुहोस्।
फन्चोजा र यसको लागि ड्रेसिंग .. विधि सुझाव दिनुहोस्। अझ सजिलो: फन्चोज, ताजा मिर्च र स्ट्रिप्समा काकडी, रस्टको साथ भर्नुहोस्। एउटा गाजर कुखुराको स्तनको फोन्चोज फिलेटको साथ बटर सलाद (घरेलु वा खरिद गरिएको) 300 ...
आलु पेनकेक्स कसरी बनाउने?
आलु पेनकेक्स कसरी बनाउने? एउटा खोरमा आलुहरू घसार्नुहोस्, एउटा अण्डा र केही पिठो, नुन, मसला राख्नुहोस् ... ब्रेडमा प्याटिज जस्तो बटरमा फ्राई गर्नुहोस् ... माथिको रेसिपीमा जानुहोस्। यदि दुई बीचमा ...
चिकन रातीको लागि कुकुर गर्ने? हेड पहिले नै आउँदैछ!
कुखुराको खानाको लागि के पकाउने? मेरो टाउको पहिले नै कताई छ! र मैले हड्डीहरूबाट खुट्टाहरू छुट्याएको छु, छालाको छालालाई सानो टुक्रामा काट्छु, खुट्टालाई करिब २--2 भागमा ...
एक घर का बना मेयोनेज बनाउन को निर्णय लिया। यो तरल आउट भयो। के कारण
घरेलु मेयोनेज बनाउने निर्णय गरे यो तरल भयो। को कारणले? सबै चीज एउटै तापमान हुनै पर्छ। कहीं टेक्नोलोजी बिग्रिएको छ वा नुस्खा गलत छ। म यो नुस्खा सोवियत कालदेखि नै बनाउँदैछु, जब मेयोनेज थियो ...
प्यानककेक्सको साथ सहयोग कति दूध, आटा, अन्डा, नमक, सोडा, मक्खन?
प्यानकेक्समा मद्दत गर्नुहोस् कति दूध, पिठो, अण्डा, नुन, सोडा, बटर तपाईंलाई आवश्यक छ? म आँखाले सबै गर्छु। एक पटकमा एक अण्डा लिनुहोस्। र त्यसपछि संविधान हेर्नुहोस्। बेकिंग सोडा नराख्नुहोस् ...
त्यहाँ पिठो, पानी, चिनी र EAT शिकार छ ...।
त्यहाँ पिठो, पानी, चिनी र EAT शिकार छ ...। पेनकेक्सले काम गर्न सक्दैन, तपाईं टोर्टिलालाई केहि प्रकारको टर्टिला बेक बनाउन सक्नुहुन्छ, केवल खमीरको आवश्यक पर्दछ पेनकेक्स पानीमा टाँसिनेछ, पेनकेक्स राम्रो हुन्छ। आटा मास्न ...
कसरी स्वादिष्ट लसुनको टुक्रा पकाउने? घरमा र बियर बारमा। म धेरै चाहन्छु।
कसरी स्वादिष्ट लसुन croutons बनाउन? घरमा र बियर बारमा जस्तै। म धेरै चाहन्छु। लसुन croutons: बासी राई रोटी को १/1 रोटी, २ चम्मच। वनस्पति तेलको चम्चा, १-२ वेजहरू ...
मोती जौ तयार पार्ने कति रमाइलो र स्वादिष्ट छ?
कसरी जौ चाँडो र मीठो तरिकाले पकाउने? perlovku var na vode .v getovuy kasu dobav iogyrt -vaas lybimii। vkysno i bistro Perlovka हतारमा तयार पारिएको डिश होईन। छिटो ...
कसरी catfish फ्राई गर्न? = हतार गर्दै ...
कसरी catfish फ्राई गर्न? = हतारमा ... हामी हतारमा क्याटफिस लिन्छौं, त्यसपछि फ्राइ pan प्यान र ओभनमा। द्रुत हात भन्दा एक फ्राइ pan प्यान मा राम्रो छ। भागहरूमा काट्नुहोस्, ब्रेड गरिएको ...
Lieszone के छ र यसलाई कसरी पकाउने हो?
लेसन भनेको के हो र कसरी पकाउने? सरल शब्दहरुमा, यो मसलाको अम्लेट हो, र ओमलेट, म आशा गर्दछु, यो एउटा असम्बन्धित डिश हो)))))))))) लिसन सबै ग्यासिएका सूपहरू तथाकथित लिटनको साथ पाक्दछन्। लेजोन निम्न रूपमा तयार गरिएको छ: मा ...
मलाई पोर्कबाट एक आहार पकवान बताउनुहोस्
मलाई पोर्क, डालेको बेकन, मीटबल्स, खुलस्त कुराकानीको डाइट्री डिश भन्नुहोस्, मेरो लागि सुँगुर र सुँगुरको मासु खान हुँदैन, सुँगुरको सबैभन्दा अधिक खाना खानु - पोर्क नखाउनुहोस्।
तपाइँलाई 300gr पकाउने कति पटक चाहिन्छ। हिला
300g खाना बनाउन कत्ति समय लाग्छ। hake fillet? माछा माछाको केटलहरू, सॉस प्यानहरू र गहिरो बेकिaking पानाहरूमा उमालिन्छ। पकाउँदा, माछा पूरै तरलमा डुबाउनु पर्छ; औसत ...
ओट्युल पकाउने कसरी, तर यसलाई पकाउनु हुँदैन?
कसरी उम्लिन बिना दलिया पकाउने? रोल्ड ओट्स किन्नुहोस् र खाना पकाउन कुनै समस्या छैन! मैले मेरो दाँतमा उमालेको पानी पोखाउँछु जबकि दलिया पहिले नै इनफ्युज थियो। केही नुन र तेल। तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ ...
कसरी पान्केक वा पेनकेक्स बनाउन कोइरायर र खमीर बिना?
केफिर र खमीर बिना पैनकेक्स वा पेनकेक्स कसरी बनाउने ??? खमीर बिना दूध संग पेनकेक्स सामग्री सूची दूध 500 मिलीलीटर अण्डाहरु2pcs चिनी २ चम्मच। चम्मच नुन १/२ चम्मच ...
कसरी दूध नूडल्स पकाउने?
दूध नूडल्स कसरी पकाउने? आवश्यक उत्पादनहरू: दूध - वर्मीसेलीको ०.m लिटर - grams 0,5 ग्राम बटर - grams० ग्राम चिनी - १ चम्मच। चम्चा नुन - १/२ चम्मच। विधि ...
सबै भन्दा राम्रो लास व्यञ्जन पाठ्यक्रम को स्वादिष्ट छ?
पाठ्यक्रम को सबैभन्दा सजिलो lasagna नुस्खा स्वादिष्ट? मैले यस नुस्खाको अनुसार पकाएँ, यो धेरै स्वादिष्ट https://usoda.ru/blog/retsept-lazani र उत्पादनहरू, बाहिरबाट, उही साइटमा, तरकारी लासग्ना पनीर 250 ग्राम नरम बाख्राको अर्डर गरीयो ...
सबै भन्दा राम्रो पिज्जा आटा नुस्खा
पिज्जा आटाको लागि सरल विधि: सामग्रीहरू: २ x cm० सेन्टीमिटर पिज्जा आधारहरू: २ चम्मच सुख्खा खमीर १ चम्मच चिनी g 2० ग्राम सेतो आटा t चम्मच जैतूनको तेल नुन साझा गर्नुहोस् ...
113 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,850 प्रश्नहरू।